Filtrer les éléments par date : mercredi, 04 novembre 2020
mercredi, 04 novembre 2020 22:04
IT University : Nanokatra lalampiofanana momba ny « design »
Mivelatra sy mivoatra hatrany. Nampahafantarina sy notokanana androany ny ITU Design School, rantsana iray eo anivon’ny IT University, manana ny foiben-toerany etsy Andoharanofotsy.
Hamaly ny filana eo amin’ny lafiny serasera, dokambarotra, tonta printy ny fisokafan’ity lalampiofanana « design » ao amin’ny IT University ity. Sehatr’asa mivelatra ary mbola malalaka rahateo ireo eto Madagasikara, saingy mitaky fahaizana manaraka ny fivoaran’ny teknôlôjia.
mercredi, 04 novembre 2020 21:58
Miandry kely aloha nareo any atsimo
Pilo kely: Miandry kely aloha nareo any atsimo, ho avy any ny filoha rehefa avy namita adidy ara-pianakaviana tany an-dafy sy amita ny fitokanana ny kolize.
Efa niainga avy aty Antananarivo rahateo ireo vary sy vatsy fanampiana, ka tsy marina izany ny filazana hoe raha nandeha an-tongotra ny vatsy fanampiana dia efa tonga.
mercredi, 04 novembre 2020 21:48
Fivadiham-pitokisana, fampiasana taratasy hosoka : Karohina fatratra i Natacha sy Haingonirina Serge Aimé
Namoahan’ny Polisim-pirenena filazana fikarohana i Natacha sy Haingonirina Serge Aimé. Voarohirohy ho amina raharaha fivadiham-pitokisana, halatra ary fanamboarana sy fampiasana taratasy hosoka izy ireo.
Niasa tamin’ireny « microfinance » na orinasa mpampindram-bola madinika ireny izy ireo.
mercredi, 04 novembre 2020 21:32
Namontana – Antananarivo IV : Voasakan'ny Polisy ireo andian-jiolahy nikasa hanafika « cash-point »
Voasambotry ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika fahefatra ireo andian-jiolahy saika hanao fanafihana teny Namontana, Boriborintany fahaefatra Antananarivo Renivohitra.
Efa-dahy niaraka tamin'ny basy miisa 02 nisy bala no tra-tehaka voalohany, fa tafatsoaka nandritra ny fifanenjehana.
Tra-tehaka teny Ambohibao ny jiolahy 01 tafatsoaka tetsy Namontana. Tetsy Mahamasina ny jiolahy fahaenina. Rehefa nosavaina ny tranon'ity farany dia nahitana basy mahery vaika "fusil d'assaut Ak 47 " sy « boite chargeur » miisa 06 tao aminy.
mercredi, 04 novembre 2020 21:31
Organisme rattaché : Nofoanana ny CREAM
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra androany ny CREAM, na ny « Centre de Recherche d’Etudes et d’Appui à l’Analyse Economique ». Voalaza fa mitovy asa amin’ny “Direction Générale de l’Economie et du Plan” ny CREAM, araka ny rafitra mipetraka eo anivon’ny ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola.
mercredi, 04 novembre 2020 19:18
CENI : Fiomanana amin'ny fifidianana Loholona
Tontosaina eto amin'ny foibe CENI Alarobia ny Sehatra ifampidinihana manodidina ny fifidianana Loholon'i Madagasikara, izay hatao ny 11 Desambra 2020 izao.
Fanakalozan-kevitra andraisana fanakianana ho fampandrosoana ny fifidianana. Modely aty afrika ny CENI eto madagasikara hoy ny filohan'ny CENI.
Mifarana amin'ny febroary 2021 ny fotoam-piasan'ireo Loholona.
Ny ben'ny tanana sy ireo mpanolontsain'ny tanàna voafidy vokatry ny fifidianana natao farany teo no mpifidy lehibe.
mercredi, 04 novembre 2020 18:57
Faritra Atsinanana : Fiomanana amin’ny taom-piotazana litchis
Misokatra androany Alarobia 04 Novambra ato amin’ny trano malalaky ny faritra Atsinanana ny « GUICHET UNIQUE ».
Toy ny isan-taona dia ato no ivon-toerana ampivondronana ireo Birao rehetra tokony handalovan’ny mpikarakara taratasy rehetra :
- Biraon’ny Hetra,
- Biraon’ny Statistiques,
- Biraon’ny Kaominina ho an’ny «droit de stationnement»,
- Ireo Sampandraharahan’ny faritra mikirakira ny lafiny « ristournes ».
Isan-taona dia fahombiazana tanteraka izao fikarakarana izao, satria dia manamora ny fiomanan’ireo rehetra mian-tsehatra amin’ity asa mandalo nefa iankinan’ny toe-karenan’ny kaominina sy ny faritra ary tokantrano maro eto Toamasina ity.